Liverpool oo Lacago Rikoodh ah ku dooneysa Weeraryahan Bur-buriyay Guriga Tababarahooda Jurgen Klopp!!!…(Sidee wax u dheceen??) – Gool FM
Liverpool oo Lacago Rikoodh ah ku dooneysa Weeraryahan Bur-buriyay Guriga Tababarahooda Jurgen Klopp!!!…(Sidee wax u dheceen??)
Byare November 14, 2018
(England) 14 Nof 2018. Liverpool ayaa la warinayaa inay Lacago Rikoodh ah ku dooneyso weeraryahanka reer France ee kooxda Barcelona Ousmane Dembele 85 milyan oo bound si ay ula soo wareegto bisha Janaayo marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Tababare Jurgen Klopp ayaa taageere u ah oo si aad ah u doonaya Dembele iyadoo ay jirto inuu waxyeeleeyay guri uu ku leeyahay dalka Jarmalka.
Reds ayaa dooneysa in 21-jirka ay ku xoojiso shaxdeeda qeybta dambe ee Premier League si ay horyaalka ugula tartanto kooxda Manchester City.
Klopp ayaana diyaar u ah inuu markale jabiyo rikoodhka dhanka suuqa ee kooxdiisa isagoo Dembele ka sara marinaya qiimihii 75 milayn uu ku soo iibsaday Virgil van Dijk.
Macalinka Barcelona Ernesto Valverde ayaa weeraryahanka reer France ka reebay shaxdiisa kulankii ay guul darada kala kulmeen Real Betis kaddib markii uu dhibaato caloosha ah ku seegay tababarka kooxda.
Tababaraha xulka Faransiiska Didier Deschamps ayaa sidoo kale daaha ka rogay in Dembele uu ka mid yahay xiddigaha leh caadada ah inay ka soo daahaan tababarka, balse wakiilkiisa Moussa Sissoko ayaa kal iyo laab ah kaliyantigiisa uga difaacay eedeymaha soo gaaraya isagoona sheegay inuu doonayo inuu sii joog Camp Nou.
Haddaba maxaad kala socotaa QISADA markii uu Ousmane Dembele ja-jabiyay Guriga Jurgen Klopp:
Qisada ayaa dhacday sanadkii hore mar uu Laacibka isku dayay inuu xoog uga soo tago Borussia Dortmund si uu ugu biiro Barcelona.
Laacibka ayaa si ay Riyadiisa ugu rimowdo xitaa ka soo tagay gurigii uu deganaa isagaa bur bursan oo aad isugu qasan.
Dhacdadaas ayaa waxay ka careysiisay Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp maadaama uu isagu yahay Milkiilaha Guriga uu ku ciyaaray Dembele markii uu ku biirayay Barcelona.
Sikastaba, Klopp weli taageere ayuu u yahay xiddiga dheereeya wuxuuna doonayaa inuu kula soo wareego lacagihii ugu badnaa ebid ee Reds.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo FARIIN dhiiro galin ah u diray Xiddigaha Xulkeena ka hor kulankooda Galabta ee Itoobiya
Keebaa wanaagsan macalimiinta Mourinho iyo Guardiola? Diego Maradona oo si cajiib ah kaga jawaab celiyay